5925/5-9-25 | GAZETY_ADALADALA
Posted on 10/04/2008 by gazetyavylavitra
Dradraina be amin’izao fotoana ny resaka fampiasana fimailo. Borosiana mafy loatra aza ary ahiao hampibirioka ny tanora Malagasy indray. Omena vahana sy tena asiana lanja betsaka eny anivon’ny haino aman-jery maro samihafa. Tsy maninona izany, nefa kosa raha izay fandaharana henoko tamina fampielezam-peo iray teto Antananarivo izay an! Tena nakasitraka tanteraka aho. Avy amin’io no nakako iry lohateny ery ambony hoe 5925/5-9-25
Nifototra tamin’ny fanabeazana momba ny resaka fahasalamana ara-pananahana (santé de la reproduction) ny ankabeazan’ny resak’ilay mpandray anjara. Fa izay tena tiako hotsindriana manokana eto dia io resaka 5925/5-9-25 io.
Entaniko manokana ary ianareo ankizilahy sy ankizivavy, saino tsara izay ho vinakinao aoriana kely eo fa hahasoa sy hiantoka ny hoavinao manontolo mihitsy.
Be loatra ny resaka fanalan-jaza, fanariana zanaka, sns manodidina an’izay resaka izay. Eny fa hatramin’ny fivarotan-janaka tsotra izao aza. Vao tamin’ny Alatsinainy 08 avril 2008 teo izao no nahitanay fatin-jaza natao tao anaty fonosana lamba tsy lena (sachet plastique) nevalan’olon-tsy vanona teo amin’ny mandidina ny tanananay. Dia ontsa ianao mieritreritra hoe: maninona raha nateraka ilay zaza dia tsy nozanahana fa naterina teny amin’ny mpitaiza zaza tsy misy mpiahy, na nitadiavana olona manaiky hitaiza azy, na koa navela tany amin’ny hopitaly hiandry izay olona tsy niteraka ka vonona ny hanagana azy. Fa dia naleon’ilay kibo nitondra azy nijery ilya silaky ny ainy ho faty sy ho toy ny fatin’alika nariana teny an’elakela-tranon’olona. Azafady raha masiaka be ny teniko fa toa tsy mafy amin’ny vehivavy sasany angamba ilay mitondra vohoka sy miteraka.
Rehefa nantsoinay ny fokontany sy ny BMH ary ny mpitandro filaminana mba hizaha ny zava-misy, dia nilaza ilay mpitsabo fa efa tany amin’ny sabotsy io mety napetraka teo fa tsy voamarikay nanodidina raha tsy efa namofona. Somary kihon-tamboho izay moa no nametrahany azy ary ny jirom-pokonolona rahateo tsy mirehitra raha tsy efa amin’ny valo sy sasany alina ety aminay Ambatomitsangana Andravoahangy (asa izay eritreritry ny tompon’andraikitra amin’izany). Hany ka manjaka na vaky trano na izao raharaha ratsy rehetra izao.
Ity ary ny fanazavana ilay 5925/5-9-25: SAINO TSARA NY ATAONAO, SAO NY FAHAFINARETANAO 5 MINITRA NO HITONDRANAO VOHOKA MANDRITRY NY 9 VOLANA, IZAY TSY TOKONY HO NATAO AKORY ALOHAN’NY FAHA 25 TAONANAO. Toy izay no azo amehezana ilay fanazavana nataon’ilay vahiny nasain’ilay onjam-peo. Resaka fahasalamana tanteraka moa no nanazavany azy io tao.
Koa ho anao tanora lahy sy vavy io, ANAO SY SAFIDY, fa IZAHO TSY MANDIDY,
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: adoption, avortement, fahasalamana, fanalan-jaza, fananahana, fananganana, santé de la reproduction |
« Hatrany Mampikony ka hatrany Mananjary Miovaova »
(eng) Post-contest translated posts (in progress), on 19/05/2008 at 12:16 said:
[…] https://gazetyavylavitra.wordpress.com/2008/04/10/59255-9-25/ by avilavitra […]